जब एक गायिकालाई स्टेजमा पैसाले बाल्टी भरेर नुहाइयो…. (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जब एक गायिकालाई स्टेजमा पैसाले बाल्टी भरेर नुहाइयो…. (भिडियो हेर्नुस्)
admin November 23, 2021 भिडियो, मनोरञ्जन 0
एजेन्सी । पैसाको वर्षा हेर्ने सबैको सपना हुन्छ । तर यदि त्यो पैसाको वर्षा तपाईका लागि भयो भने के गर्नु हुन्छ ? भारत गुजरातको अहमदाबादमा यस्तै दृश्य देखिएको छ । जहाँ प्रख्यात गुजराती गायिका उर्वशी राडाडियालाई नोटको बाल्टिनले वर्षा गरिएको थियो।
उर्वशी राडाडियामा नोटको वर्षा
उर्वशी राडाडिया एक कार्यक्रममा प्रस्तुति थिइन् । त्यसपछि एकजना पछाडिबाट आएर बाल्टिन भरेर नोटको वर्षा गर्न थाल्छन् । स्टेज वरिपरि नोटहरू छरिएका छन्। उर्वशी राडाडियाले गीत गाउने पछाडि पैसाको थुप्रो छ । यो अचम्मको दृश्यले वास्तवमै सबैलाई ओ हो भन्न बाध्य तुल्याइरहेको छ। दर्शकमाझ उपस्थित मानिसहरूले पनि गायीकमाथि पैसाको वर्षा गरिरहेका छन् ।
उर्वशी राडाडियामाथि नोटको वर्षा भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो हेरेपछि जनता ज ल्न बाध्य छन् । यो भिडियो इन्स्टामा सेयर गर्दै उर्वशी राडाडियाले लेखेकी छिन्– श्री समस्त हिरवाडी समूहले तुलसी विवाहको आयोजना गरेको छ, जसमा लोकदिरा आयोजना गरिएको छ । तपाईको अमूल्य मायाको लागि तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
को हुन् उर्वशी राडाडिया ?
उर्वशी राडाडिया एक प्रसिद्ध गुजराती लोक गायिका हुन्। उनलाई काठियावाडको कोयल पनि भनिन्छ । उनी आफ्नो गीत ‘नगर नन्द जी न लाल’का लागि चर्चित छन् । उर्वशी अहमदाबादमा हुर्किएकी थिइन् । उनले ६ वर्षको उमेरमा आफ्नो सांगीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । उर्वशीले तीन वर्ष शास्त्रीय संगीतको तालिम लिएकी थिइन् । आज आफू जे छु, त्यो आफ्नो संगीतकै कारण भएको उनको विश्वास छ ।
उर्वशी शीर्ष गुजराती गायिकाहरूमा गनिन्छिन्। उर्वशी सानैदेखि आईएएस बन्ने सपना देख्थिन् । तर परिवारको जिम्मेवारीले गर्दा उनको चाहना अधुरै रह्यो । उर्वशीले हिन्दी, पञ्जाबी, मराठी, राजस्थानीमा पनि गीत गाउँछिन् ।
नेपाली मूलककि यी युवती अमेरिकामा पहिलो पटक सांसद बन्दै…